प्रधानमन्त्रीलाई के थियो र त्यस्तो बाध्यता ? « Jana Aastha News Online
प्रधानमन्त्रीलाई के थियो र त्यस्तो बाध्यता ?
प्रकाशित मिति : १८ असार २०७८, शुक्रबार १४:०५
आजको सँवैधानिक इजलाशमा प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर कानुन व्यवसायीहरु रमेश गुरागाई,बिष्णुमणि अधिकारी,ईश्वरीप्रसाद भट्टराई,भोजराज आचार्य,बलबहादुर राई र शान्तिदेवी खनालले बहस गरेका छन् ।
अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीले रिट निवेदकतर्फका अधिवक्ताहरुले राजनैतिक नेताहरुले झैं अदालतमा आएर भाषण गरेको आरोप लगाए । राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा लाग्ने व्यवस्था संविधानले नगरेको जिकिर गर्दै उनले धारा ७६ को उपधारा (५) मा व्यवस्था भएको आधारलाई राष्ट्रपतिले नै मूल्याङ्कन गर्ने बताए ।
प्रधानन्यायधीश राणाले नयाँ कुरा भए भन्नुहोस्,उही कुरा कति दोह्रोर्याउने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
उनले पनि अदालतबाट,मुलुकलाई निर्दलीयतातर्फ लैजाने गरी संविधानको व्याख्या हुनै नसक्ने जिकिर गरे । त्यसपछि बहसमा उत्रिएका ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाएर उहाँविरुध्द मुद्धा दायर नहुने ठोकुवा गरे ।
उनीपछि बहसमा उत्रिएका भोजराज आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता कब्जा गर्न खोजेको नभई निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै प्रमको बचाउमा समय खर्चिए । उनले एमालेको ट्रेडमार्क चोरी भएको आरोप लगाए । भने,”नेका सभापति शेरबहादुर देउवाले सांसदको हस्ताक्षरसहित एमालेको ट्रेडमार्क सूर्य चिह्नको बौद्धिक चोरी गरेका छन् ।”
यसपछि बोल्ने समय पाएका प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले,प्रधानमन्त्री ओलीले लहड वा रहरमा प्रतिनिधिसभा बिघटन नगरेको,संवैधानिक बाध्यतामा परेर संसद बिघटन भएको र यसलाई दुराशय भन्न नमिल्ने तर्क राखे ।
उनले आधार नदेखेका कारण प्रधानमन्त्रीका दुबै प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नुभएको,उहाँमाथि परमादेश जारी हुनै नसक्ने र संसद् पनि पुनर्स्थापना हुनै नसक्ने ठोकुवा गर्दै प्रतिनिधिसभा बिघटनको घटनालाई प्रम ओलीको संवैधानिक बाध्यताका रुपमा व्याख्या गर्न भ्याए ।
यसपछि बहसमा उत्रिएका बलबहादुर राई र शान्तिदेवी खनालले उही पुरानै बिषय दोह्रोर्याएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशले रोक्नुपरेको थियो । इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश राणाले नयाँ कुरा भए भन्नुहोस्,उही कुरा कति दोह्रोर्याउने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
योसँगै ओली पक्षधर कानुन व्यवसायीहरुको बहस सकिएको छ । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले एउटा कोर्स पूरा भएको,अब सभामुख पक्षधर कानुन व्यवसायी र त्यसपछि एमिकस क्युरीको राय लिइने बताउनुभयो ।
यो सँगै आजको इजलाश सकिएको छ । अब आइतबार सभामुख पक्षधर ५ कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् । उनीहरुले डेढ घण्टा अपुग हुने भन्दै समय थपिदिन माग गर्दै आएका छन् ।